Ampanihy Andrefana Nodorana avy hatrany ireo henan-tsokatra tratra
Henan-tsokatra maina milanja 350kg nokasaina hamidy no sarona ka nodorana tany amin’ny tanànan’Antranoavo, kaominina ambanivohitra Androhipano,
distrikan’Ampanihy Andrefana ny 05 febroary lasa teo. Sokatra arovana ahiana ho lany tamingana miisa 7 ihany koa no tratra niaraka tamin’izy ireo ka naverina any amin'ny toerana sahaza azy. Loharanom-baovao avy amin'ny olona tsara sitrapo no nahafantarana izany raha ny zandary avy eo anivon'ny kaompania Ampanihy andrefana no nanao ny asa. Raha tsiahivina moa dia vokatry ny fiaraha-miasa tamin'ny WWF sy ny MNP no nahazoana izao vokatra izao. Tao anaty gony miisa 14 ireo henan-tsokatra maina niaraka tamin’ireo sokatra velona miisa 7 ireo. Nodorana teo anatrehan'ny tompon’andraiki-panjakana ireo hena ireo ny 10 febroary teo noho ny antony ara-pahasalamana. Ireo sokatra velona kosa natolotra ny "Chef cantonnement" ao an-toerana mba ahafahana mamerina azy amin'ny toerana tokony hisy azy. Tsiahivina moa fa voararan'ny lalàna velona ny misambotra, mamono, mivarotra, mividy, manondrana ireo sokatra arovana ahiana ho lany tamingana eto amintsika.